Software Secrets Review - 500 Software Ideas Generator - Lantonoara Of The Day
Ny tena endri-javatra Software boky Secret dia afaka mora foana ny fifandraisany mamorona izay afaka ihany no azo aseho amin'ny iray mira: zava-miafina rindrambaiko famerenana – 500 rindrambaiko hevitra gropy.
Hahita ny tenanao amin'ny fampiasana fitaovana maro izay tsy manana na dia mieritreritra ny taloha mba hamela ny mamorona mihazakazaka bibidia.
Whiteboards fa brainstorming ho zavatra iraisana ho anao.
Building saina Maps raha hitantana ny fikorianan'ny ny hevitra sy ny fomba azo ampifandraisina dia hanampy anao mamorona rafitra tsara kokoa noho ny fisainany dingana.
Wireframing mockup ny hevitra dia hanampy anao sary ny fomba azo mivoatra ary raha ny hevitra izany’ farany miendrika ny fomba te-, ianao manomboka ny tetikasa fampandrosoana.
Hisoratra anarana amin'ny FREE "Hanorina sy Mandrosoa ny tenanao Software In The Next 90 andro " Training
Filed Under: Tsiambaratelo momba ny lozisialy Tagged With: zava-miafina rindrambaiko famerenana - 500 rindrambaiko hevitra gropy